“In La Kordhiyo Tirada Xukuumada Kulmiye Waa Mid Duruufi Keentay ,Laakin Maaha Tani Mid Sidii Udub Aanu Ku Dhaliili Jirnay La Iska Magacaabo” Maxamed Kaahin | Salaan Media
Home Wararka “In La Kordhiyo Tirada Xukuumada Kulmiye Waa Mid Duruufi Keentay ,Laakin Maaha...
(SM:Hargaysa) Xisbiga kulmiye wax daliil ah oo lagu qanco wuu u waayay korodhka Xad-dhaafka ah ee Xukuumadda madaxweyne Siilaanyo, taas oo tiro ahaan laba jibaaran xajmigii Xisbigu balanqaaday inuu ka dhigayo Golihiisa xukuumadda xiligii uu Mucaaridka ahaa.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Xisbigaasi Maxamed Kaahin Axmed oo Waraysi siiyay Telefishanka Qaranka Somaliland qaybtiisa London, ayaa Kordhinta Madaxweyne Siilaanyo ku sameeyay Golihiisa Wasiirrada mudadii uu dalka hogaaminayay, ku macneeyay arimo duruufi keentay oo si Xirfadi ku dheehantahay loo dhisay.
“In la kordhiyo Golaha Xukuumadda oo mid siyaasadda Xukuumaddu garatay oo duruufi keentay, waxaana go’aansaday madaxweynaha, isagoo ka duulaya danaha siyaasadeed iyo duruufaha waddanka yaala, laakiinse maaha mid sidii berigii hore aan UDUB ku dhaliili jirnay layska magacaabaye, waa mid si xirfad leh loo dhisay”ayuu kaga baxay Maxamed Kaahin Axmed oo su’aal laga waydiiyay halka ay ku dambeysay Xukuumaddii tirada yarayd ee Xisbigu balan qaaday xiligii ololaha Doorashada.
Jawaabta Maxamed Kaahin Axmed ka bixiyay arintan ayaa u muuqatay markii uu ka jawaabayay mid taabanaysa waaqic Xisbigu ka talaabsaday, ka dib balanqaadkii uu u sameeyay taageerayaashiisa, waxaanu uga fal-celiyay dhawr jeer oo wariyuhu ku cel-celiyay si taxadar badani ka muuqdo, isla markana uu taabashada xaqiiqda kaga dabin-dhawrayo.
Dhinaca kale, Guddoomiye Maxmed Kaahin Axmed oo la waydiiyay halka uu ku dambeeyay xidhiidhkii wanaagsanaa ee Xisbigiisa iyo saxaafadda Madaxbanaan ka dhexeeyay xiligii Mucaaridka uu ahaa, ayaa ku dooday inuu wali jiro xidhiidhkaasi oo aanay waxba iska bedelin, wallow uu qiray inay dhici karaan gabood-falo aanu Miisaankooda cadayn oo ka dhex dhici kara Warfidiyeenada iyo Bilayska.
“Xisbiga Kulmiye Dusha ayuu ku qaadan doonaa wixii dhibaato saxaafadda lagula kaco, laakiinse waxa loo baahanyahay inay saxaafadda lafteedu Xeerar iyo anshax yeelato”ayuu kaga jawaabay su’aal lagu cel-celiyay oo laga waydiiyay mawduucan.